Guam's Air V&V Chirongwa chakagadzirira kusimuka
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » Zimbabwe Breaking News » Guam's Mhepo V & V Chirongwa chakagadzirira kusimuka
Airlines • nhandare yendege • avhiyesheni • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • Hurumende Nhau • Zimbabwe Breaking News • Health News • Hospitality Industry • Hotera & Resorts • Investments • nhau • Kuvakazve • Resorts • Kutarisirwa • ushanyi • Tourism Kutaura • kutakura • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Zvakavanzika Zvokufamba • Kufamba Wire Nhau • USA Kuputsa Nhau • Akasiyana Nhau
Iyo Air Vaccination & Vacation Chirongwa yakagadziridzwa neGuam Visitors Bureau kukurudzira avo vane makore gumi nemaviri zvichikwira kuti vawane jekiseni re COVID-12 vachiri pazororo kuGuam.
Air V&V chirongwa chakabvumidzwa zviri pamutemo naGuam Gavhuna Lou Leon Guerrero uye neDhipatimendi reHuzhinji Hutano uye Zvemagariro Services.
Chirongwa ichi chinotora yakasarudzika huwandu hwevashanyi kutenderera pasirese vakaneta nekumirira kubayiwa jekiseni mudenda iri.
Asati asvika kuGuam, vatori vechikamu vechirongwa vanofanirwa kunyorera pasuru yavo neimwe yehotera dzinotora chikamu.
The Guam Vashanyi Bureau (GVB) yakazivisa kuti chirongwa cheMweya V&V (wekudzivirira uye wezororo) chakatenderwa zviri pamutemo naGavhuna Lou Leon Guerrero uye neDhipatimendi reHuzhinji Hutano neSocial Services (DPHSS).
"Ndinoda kutenda Gavhuna Lou Leon Guerrero, Lt. Gavhuna Josh Tenorio, DPHSS Director Art San Agustin, uye Acting Chief Public Health Officer Chima Mbakwem nekutichenesa nzira yekuti titengese Guam senzvimbo yekuAmerica yekusarudza kana zvasvika pakukurudzira. US inotsvaga uye vagari vasiri vekuUSA kuti vaende kuchitsuwa chedu kunovharirwa nekupedza nguva yavo yezororo nesu, "akadaro Carl TC Gutierrez, Mutungamiri weGVB uye CEO. “Chirongwa ichi chinotora huwandu hwevanhu vanofamba pasi rose vaneta nekumirira kubayiwa majekiseni mudenda iri. Izvi zvichapa mukana kumaindasitiri edu ezvekushanya kuburikidza nebasa rakakosha uye rinokosha, zvichipa mikana yakawanda yekudzosera vanhu vedu kumabasa uye kuita kuti hupfumi hwedu huwonge zvakare. ”
Vasiri-US vagari vakagamuchirwa
Nerutsigiro rwaSachigaro Milton Morinaga uye GVB Board of Directors, GVB yakashanda neGuam Hotel & Restaurant Association, Physicians Advisory Group nasachigaro wayo Dr. Hoa Nguyen, Col. Mike Cruz neGuam Surgeon Cell, uye DPHSS kuti vawane chirongwa chakagadzirira misika yechitsuwa, pamwe nedzimwe nyika. Guam ikozvino inogona kugamuchira zviri pamutemo vagari vemuU.S. vanogara kunze kwenyika, vane makadhi girini, uye zvakare vasiri vemuUnited States kuti vawane kubayiwa nemishonga yezororo.
Mitemo yeMhepo V & V
Asati asvika kuGuam, vatori vechikamu vechirongwa vanofanirwa kunyorera pasuru yavo neimwe yehotera dzinotora chikamu. Ihotera iyi inobatsira pakuronga majekiseni ekudzivirira uye PCR yevatambi veMweya V & V. Vafambi vese vekunze vanofanirwa kupa yakaipa PCR bvunzo vasati vakwira ndege yavo kuenda kuGuam. Pakusvika, vatori vechikamu vechirongwa cheMweya V&V vanogashira bvunzo ye COVID-19 kuverengera kuti vanokwanisa kugamuchira mushonga (Pfizer, Moderna, kana Johnson & Johnson) zuva rinotevera kubva kunyaradzo yeimba yavo yehotera. Kana vakasarudza Moderna kana Pfizer, yavo yechipiri dosi ichave yakarongwa.
Ndichiri kuGuam, vanofanirwa kuenda kunzvimbo yekuzvimiririra yemazuva manomwe kunzvimbo yekuzvibhadharira pavanosvika kuGuam. Vangave nesarudzo yekutora bvunzo yePRC paZuva 7 rekuvharirwa uye kana vakaongorora zvisina kunaka nezve COVID-6, vanozosunungurwa. Zvinodikanwa zvakare kuti vanyorese naSara Alert yekutarisa kusvika kumazuva gumi nemana, uye kurodha pasi Guam COVID Alert App.
Sechikamu chechirongwa, ivo vanowanawo PCR bvunzo kwete anopfuura maawa makumi manomwe nemaviri vasati vaenda. Vatori vechikamu vanozoenda kubva kuGuam nekadhi ravo rekudzivirira kubaya uye yekudzivirira hutongi hwemasimba.
Mapakeji akapihwa ekufamba
Mukubatana nenharaunda yezvokurapa yeGuam, kutengeserana kwekufamba, uye vanobatsirana muhotera, ese-mu-one mapakeji akagadzirwa kuti ape vafambi vanofarira. Iwo mapakeji ekufambisa anosanganisira kutakurwa kuenda uye kubva kunhandare yendege, matatu COVID-19 bvunzo, manejimendi maviri madosi echirwere, kuongororwa kwehutano, uye marekodhi ekudzivirira edigital.
Mhepo V & V mapakeji anogona kunyoreswa zvakananga neaya anotevera mahotera: Dusit Thani Guam Resort, Grand Plaza Hotel, Guam Reef Hotel, Hotera Nikko Guam, Hyatt Regency Guam, LeoPalace Resort, Lotte Hotel, Pacific Islands Club, Royal Orchid Hotel, uye Tsubaki Shongwe.